Matoor dayaaradeed oo qarxay iyo haweeney ku dhimatay - BBC News Somali
Matoor dayaaradeed oo qarxay iyo haweeney ku dhimatay
18 Abriil 2018
Lahaanshaha sawirka UNITED WAY OF CENTRAL NEW MEXICO
Image caption Jennifer Riordan waa hooyo laba ilmood leh oo banki ka shaqaysa
Haweeney qayb ahaan ka baxday daaqadda diyaarad rakaab sidday ayaa geeriyootay ka dib markii matoorka diyaaradda uu qarxay.
Diyaaraddan oo ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Southwest Airlines ayaa gashay xaalad dagdag ah ka dib markii baalka iyo injiinka diyaaradda ay waxyeello soo gaareen.
Diyaaradda ayaa ku dagtay magaalada Philadelphia, iyadoo ay 7 ka mid ah rakaabkii saarnaa diyaaradda ay dhaacwacyo soo gaareen.
Diyaaraddan oo ka soo duushay magaalada New York ayaa si dagdag ah u degtay, dab damiyayaasha ku sugnaa goobtaasna waxay sheegeen in ay arkeen shidaal daadanaya kaas oo waxyeello soo gaarsiiyey injinka diyaaradda.
Lahaanshaha sawirka TWITTER/ @MTRANCHIN
Image caption Sawirkan waxaa qaaday qof rakaabka ka mid ah, waana daaqaddii jabtay
Diyaaradda ayaa waxaa saarnaa rakaab gaaraya 143 qof iyo shaqaalaha ka howlgalayey diyaaradda.
Haweeneyda geeriyootay ayaa fadhiday daaqadda agteeda. Bir ka soo go'day matoorka ayaa jabisay daaqadda intii ay dayaaraddu duulaysay, taasoo keentay in haweeneydu ku sigato inay dayaaradda dibadda uga baxdo.
Dadkii dayaaradda saarnaa iyo shaqaalaha ayaa u gurmaday oo qabtay, waxayna dayaaraddu soo fariisatay ayadoo haweeneyda qayb jirkeeda ka mid ah uu banaanka uga baxsanaa dayaaradda.
Image caption Baarayaasha NTSB oo baaraya matoorka dayaaradda
Maamulka waaxda diyaaradaha ee dalka Mareykanka ayaa bilaabay baaritaan ku aaddan arrintaa.
Waxaa horay baaritaan hordhac ah u sameeyey ururka maareeya amniga gaadiidka ee qaranka, iyagoo shaaciyey in injiinka diyaaradda ay wax ka maqnaayeen ,waxaana ay sidoo kale soo saareen caddaymo muujinaya in uu burbur soo gaaray biraha diyaaradda.